राखी सावंत कंगाल बनिन् ! भन्छिन् ‘मलाई पैसाको निकै खाँचो छ आफन्तले नै दिए धोका र मेरो सबै सम्पत्ती लिए’ – live 60media
राखी सावंत कंगाल बनिन् ! भन्छिन् ‘मलाई पैसाको निकै खाँचो छ आफन्तले नै दिए धोका र मेरो सबै सम्पत्ती लिए’
एजेन्सी । अनेक कृयाकलापका कारण विवादित बनिहरने बलिउड कलाकार राखि सावन्तले आफु कंगाल भएको र अहिले पैसाको निकै आवश्यकता भएको बताएकी छन् । उनको यस्तो भनाईले वलिउडमा फेरी तरंग उत्पन्न भएको छ । विवादित अभिनेत्री राखी सावंत बिग बॉसको घरभित्र जाँदैछन् । सलमान खानले उनको बारेमा परिचय दिंदै उनी आउन लागेको खबर सप्ताहन्तमा गरेका थिए।
घर जानु भन्दा पहिले राखीले शो र त्यहाँ रहेकाहरुका बारेमा बोलेकी थिइन। भर्खरै, राखीले किन ुबिग बॉस १४ मा जाँदैछन् भन्ने बारेमा कुरा गरेकी छन् । भारतीय ईटाइम्स टिभीसँग कुराकानीमा राखी सावंतले भनिन् कि उनी ‘बिग बॉस’ १४ मा यस कारण गइरहेकी छु की मलाई अहिले पैसाको निकै खाँचो छ ।
राखीले भनिन्, ‘साँच्चै भन्ने हो भने मलाई धेरै पैसा चाहिन्छ। म बलिउडमा दोस्रो मौका चाहन्छु। म ट्रफी जित्न चाहन्छु। म सँधै यो शो जित्न चाहान्छु, तर मेरो क्यारियरमा यस्तो अवसर कहिले पाएन। यस पटक म ‘बिग बॉस’ १४ जित्न चाहन्छु। पुरस्कार पैसा पनि धेरै नै छ (५० लाख) ।
म नगद पुरस्कार जित्न चाहन्छु किनकि मलाई पैसा चाहिन्छ। राखीले अझै भनिन्, ‘मान्छेहरू अचम्ममा पर्छन् कि मलाई अचानक किन पैसा चाहिन्छ। त्यसैले म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि कसैले मलाई धोका दिए। म अब आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सक्दिन किनभने मलाई धोका दिने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। त्यो व्यक्तिले मेरो सबै पैसा, सबै सम्पत्ति लियो । त्यसैले मैले कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकार गरें। म ट्रफी जित्न चाहन्छु।
← ४२ बर्षिय नेपाली सुरक्षागार्ड भिम बहादुर मगरको उपचार नपाएर मलेसियामा निधन
अस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डाक्टरको हातमा, शरीर गर्भमै छुट्यो! →